Magacyada mas’uuliyiinta ku dhintay qaraxa xarunta G/Banaadir iyo Alshabaab oo sheegtay Qaraxaasi – Hornafrik Media Network
Magacyada mas’uuliyiinta ku dhintay qaraxa xarunta G/Banaadir iyo Alshabaab oo sheegtay Qaraxaasi
By HornAfrik	 On Jul 24, 2019
3 – Guddoomiyihii degmada Shangaani Sahra Markeyzi
4 – Agaasimaha Nadaafadda gobolka Cabdifataax Cumar Xalane
5 – Agaasimahii Shaqaalaha Maamulka gobolka Banaadir Cabdullaahi Dheere.
6 – La-taliyaga duqa Muqdishi Avv Xasan Maxamed Sabriye
7 – Agaasimaha qorsheynta deegaanka dowladda hoose, Ijineer Shuuriye.
Kooxda Al-Shabaab ayaa sheegatay mas’uuliyadda qaraxii galabta ka dhacay hoolka shirarka ee xarunta gobolka Banaadir, kaasi oo dhaliyey khasaare xooggan.
War rasmi ah oo kasoo baxay A-Shabaab ayaa lagu sheegay in bartilmaameedka qaraxaas uu ahaa ergeyga gaarka ah ee xogahayha guud ee QM u qaabilsan Soomaaliya, James Swan oo u dhashay dalka Mareykanka.
DF Somalia oo ka jawaabtay eedeynta loo jeediyey Qatar
XOG-qofki isku qarxiyay xarunta G/Banaadir oo la ogaaday.